ट्वाइलेटमा मोबाइल प्रयोग गर्नाले लाग्न सक्छ गम्बिर रोग – Agrimpost
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यट्वाइलेटमा मोबाइल प्रयोग गर्नाले लाग्न सक्छ गम्बिर रोग
ट्वाइलेटमा मोबाइल प्रयोग गर्नाले लाग्न सक्छ गम्बिर रोग
दिसापिसाब गर्ने बेलामा ट्वाइलेटमा मोबाइल पनि सँगै लग्ने गर्नुभएको छ ? दिसा बस्दै मोबाइल हेर्दै गर्नुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने आजैबाट त्यो बानी छाड्नुहोला । किनकी, ट्वाइलेटमा मोबाइल हेर्ने बानीले तपाइँलाई पाइल्स गराउन सक्छ । खासगरी दिसा गर्ने बेलामा मोबाइल हेर्ने बानीले पाइल्सको जोखिम बढाउने बताइएको छ । मोबाइल हेर्दै दिसा गर्दा लामो समय लाग्ने र त्यसबेला मलद्वारका रक्तनलीहरुमा चाप बढ्नाले पाइल्सको जोखिम बढ्ने विज्ञहरुको निष्कर्ष छ ।
हालै बेलायतमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार ५७ प्रतिशत बेलायतीले ट्वाइलेटमा मोबाइल प्रयोग गर्दछन् । त्यसमध्ये ८ प्रतिशतले त सधै नै ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउने गरेका छन् । ट्वाइलेट बस्दा मोबाइल चलाउनु मात्र हानिकारक होइन । किताब पढेर वा अरु नै कुरामा भुलेर दिसा गर्दा धेरै जोड लगाउने र लामो समय बिताउने गर्नाले पाइल्सको जोखिम बढ्ने विज्ञहरु बताउँछन् । एजेन्सीको सहयोगमा
सुँगुरको मासु खाएर थप एक कैदीको मृत्यु
दशैंमा खसीको पक्कु बनाउने तरिका
महिनावारी सम्बन्धी यी ५ तथ्य, जुन धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ
मोटी युवतीसँग विवाह गर्दा जीवन सुखमय हुने तथ्य सार्बजनिक
लसुनको चिया खानुहोस क्यान्सर, मुटुरोगजस्ता समस्याबाट जोगाउँछ
मासु खाँदै हुनुहुन्छ, क्यान्सरविज्ञकाे सुझाव सुन्नुस !